5 Makiyi Webhusaiti Metric Zvikamu Iwe Unofanirwa Kuongorora | Martech Zone
5 Makiyi Webhusaiti Metric Zvikamu Iwe Unofanirwa Kuongorora
Muvhuro, April 13, 2015 Chipiri, June 16, 2015 Jenn Lisak Golding
Kuuya kwedata hombe kwakaunza hurukuro dzakasiyana dzakasiyana maererano analytics, kuteedzera uye kuyera kushambadzira. Sevashambadziri, isu tinonyatso kuziva kukosha kwekutevera kwedu kuedza, asi isu tinogona kukundwa nezvatinofanirwa kunge tichiteedzera uye zvatisiri; chii, pakupera kwezuva, chatinofanira kunge tichishandisa nguva yedu pazviri?
Kunyange paine mazana chaiwo emametric atinogona kunge takatarisa, ini pachinzvimbo ndinokukurudzira kuti utarise pane mashanu makuru webhusaiti metric zvikamu uye uone metric mukati meaya mapoka akakosha kune rako bhizinesi:
WHO yakashanyira webhusaiti yako.
NEI vakauya kune yako saiti.
Nepo izvi zvikamu zvishanu zvichirerutsa zvatiri kuyedza kuyera kana mumwe munhu akauya kune yedu saiti, zviri kunyanya kuomarara patiri kuyedza kuona kuti ndeapi metric akakosha uye ndeapi asiri. Handisi kuti iwe haufanire kutarisisa kune akasiyana mametric, asi sezvose zvimwe zviri mukushambadzira, isu tinofanirwa kukoshesa mabasa edu ezuva nezuva uyezve, kurondedzera kwedu, kuti tikwanise kugaya ruzivo rwuchatibatsira gadzira nzira dzekushandura.
Metric Mukati mega Chikamu
Nepo zvikamu zvacho zvichinyatso kujekesa, mametriki anofanirwa kuteedzerwa mukati mechikamu chimwe nechimwe haawanzo kuve pachena. Ngatitarisei pamhando dzakasiyana dzemetriki mukati meimwe chikamu.
ani: Kunyange munhu wese achida kuziva kuti ndiani akauya kunzvimbo yavo, hatigone kuwana ruzivo irworwo. Nekudaro, kune maturusi, senge IP kero lookups, ayo anogona kutibatsira kudzikisa chiyero. Kubatsira kukuru kweIP lookups ndeyekuti inogona kutiudza iyo kambani yaishanyira yako saiti. Kana iwe uchikwanisa kuteedzera kuti ndeapi IPs ari kushanyira yako saiti, saka iwe uri nhanho imwe padhuze nekuziva ndiani. Zvakajairika analytics zvishandiso kazhinji hazvipe ruzivo urwu.
Sei: Nei mumwe munhu achiuya kune saiti anozviisa pasi, asi pane zviyero zviyero zvatinogona kushandisa kubatsira kuona kuti sei vari. Mimwe yeiyi inosanganisira: mapeji anoshanyirwa, huwandu hwenguva yakashandiswa pamapeji iwayo, nzira dzekushandura (kufambira mberi kwemapeji api avakashanyira panzvimbo iyi) uye sosi yekutsvagisa kana rudzi rwemigwagwa. Nekutarisa pamametric aya, unogona kuita fungidziro zvine musoro nezvekuti nei mushanyi auya kune yako saiti.
sei: Sei mushanyi webhusaiti aakawana iwe unogona kuratidza SEM yako kana kuyedza kwenzanga. Tichitarisa iyo inokuudza sei iko kuedza kwako kuri kushanda uye kwaisiri, asi zvakare inokuudza iwe kwaunotumira mameseji kubudirira. Kana mumwe munhu akakuwana kubva kutsvagiro yeGoogle uye vobaya pane yako link, unoziva kuti chimwe chinhu mumutauro wako chakavamanikidza kuti vadaro. Iwo ekutanga metric pano ndeye traffic mhando kana yekuendesa sosi.
chii: Chii chakatariswa nevashanyi chingangodaro chiri chakananga pane izvi zvikamu. Iyo yekutanga metric pano ndeapi mapeji akashanyirwa, uye iwe unogona kunyatso kuona yakawanda neruzivo irworwo.
apo: Pakupedzisira, uko mushanyi akabuda anogona kukuudza kwavakarasa kufarira. Tarisa uone mapeji ekubuda uye uone kana paine chero mapeji anoramba achiuya. Chinja zvemukati pane peji uye ramba uchikudza, kunyanya kana iri peji rekumhara. Iwe unogona kazhinji kuwana iko uko mushanyi akabuda ruzivo kubva kune zvakajairika analytics zvishandiso senge Google Analytics muchikamu chekushandura nzira.
Uri kutarisa kune yega yega yezvikamu izvi uye kugadzirisa zvako zvemukati kana webhusaiti zvichibva pane data riri kudzoka? Kana iwe ukaongororwa pane kuita kwewebhu webhusaiti, saka unofanirwa kuve.
Tags: analytics metricsinbound Marketingmetrics